सुन र चाँदीको भाउ घट्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? Bizshala -
सुन र चाँदीको भाउ घट्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाण्डौ । सुनको भाउ बिहीबार तोलामा रु २०० ले घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार तोलमा रु.२०० ले घटेर प्रतितोला छापावाल सुन रु. ७२०० र तेजाब सुन रु. ७१ हजार ७०० कायम भएको छ । हिजो बुधबार एकैदिन तोलामा रु ८०० ले बढेर प्रतितोला छापावाल सुन रु. ७२ हजार २०० र तेजाबी सुन रु.७१ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको थियो । यो मंसिर महिनायताकै उच्च भाउ हो ।
यो साताको सोमबार र मंगलबार सुन प्रतितोला छापावाल रु. ७१ हजार ४०० र तेजाबी रु. ७१ हजार १०० मा कारोबार भएको थियो । जुन कारोबारको पहिलो दिन आइतबारको तुलनामा रु. २०० ले घटेको थियो । आइतबार प्रतितोला छापावाल सुन रु. २१ हजार ६०० र तेजाबी सुन रु. ७१ हजार ३०० थियो ।
उता चाँदीको भाउ बिहीबार तोलामै रु. १५ ले घटेर प्रतितोला रु ८५० रुपैयाँ कायम भएको छ । बुधबार चाँदी प्रतितोला एकैदिन रु. १५ बढेर प्रतितोला रु. ८६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
कारोबारको पहिलो दिन आइतबार प्रतितोला रु. ८५५ रहेको चाँदीको भाउ सोमबार र मंगलबार भने रु. ५ घटेर रु.८५० मा कारोबार भएको थियो ।
निषेधाज्ञाभरि बैंकमार्फत हुने सुनको आयात रोक्ने व्यवसायीको
काठमाण्डौ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले निषेधाज्ञा अवधिभर...